सय रुपैंयाँ दरका १४ अर्बको सेयर आउँदै, के होला दोश्रो बजार ?  BikashNews
सय रुपैंयाँ दरका १४ अर्बको सेयर आउँदै, के होला दोश्रो बजार ?
२०७४ माघ २८ गते १४:५२ नारायण पौडेल
काठमाडौं । बजारमा लगानी योग्य पूँजीको चरम अभावले बैंकहरु ऋण प्रवाह गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । एनआइसी एसिया बैंकको ग्रोथ फण्ड र सिटिजन्स बैंकको सिटिजन म्युचुअल फण्डमा मात्रै होइन बुटवल पावर कम्पनीको एफपीओमा समेत लगानीकर्ताको खासै चासो देखिएन ।
यी कुनै पनि कम्पनीको सबै सेयर बिक्रि भएनन् । यसको सिधा अर्थ भनेको बैंकहरुसँग लगानी योग्य पुँजीको अभाव, सेयरको व्यापक आपुर्ति र लगानी कर्ताको कमजोर मनोबल नै हो ।ठिक यस्तै समयमा एक सय रुपैंयाँ मूल्य अंकित १४ अर्ब ३८ करोड मूल्य बराबरको सेयर आउँदैछ । १७ वटा कम्पनीले ३ अर्ब ८० करोड ११ हजार १ सय मूल्य बराबरको आइपीओ निष्काशनको अनुमति कुरिरहेका छन् ।
तीमध्ये १४ वटा जलविद्युत कम्पनी छन भने २ वटा लघुवित्त र एउटा बाणिज्य बैंकको एफपीओ छ । अर्काे तर्फ १६ वटा कम्पनीको १० अर्ब ६८ करोड मूल्य बराबरको हकप्रद सेयर आउँदैछ । ती कम्पनीहरु धितोपत्र बोर्डबाट निष्काशन अनुमतिको पर्खाइमा रहेका छन् । हकप्रद सेयर निष्काशनको तयारी गरेकामध्ये १४ वटा जलविद्युत कम्पनी छन ।
के भन्छन मर्चेण्ट बैंकर
सिद्धार्थ क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव तिमल्सिनाले भने म्युचुअफ फण्डबारे लगानी कर्तालाई बुझाउन नसक्दा पुरै फण्ड बिक्रि नहुने अवस्था आएको बताए । ‘म्युचुअल फण्डका बारेमा लगानी कर्तालाई राम्रोसँग बुझाउन सकिएन र प्रतिफल सुनिश्चित हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान स्थापित गराउन नसक्दा कतिपय कम्पनीको म्युचुअल फण्ड पुरै बिकेन’, मर्चेण्ट बैंकर्स एसोसियनसका अध्यक्ष समेत रहेका तिमल्सिनाले भने ।
उनले बजारमा लगानी योग्य पुँजी अभावको अवस्था अब हट्ने भएकाले सेयर बजारमा पनि बढ्न सक्ने अनुमान पनि गरे । ‘बजारबारे ठ्याक्कै अनुमान गर्न सकिन्न तर तरलता अभावको समस्या अब समान हुँदै जाने भएकाले केहि आशावादी हुन सकिने ठाउँ छ’, तिमल्सिनाले भने ।
लगानी कर्ताको मनोबल घटेको छः छोटेलाल रौनियार
सेयर इन्भेष्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले नियामक निकायहरुको लापरवाहीका कारण सेयर बजारमा आपुर्तिको भेल आएको आरोप लगाए । उनले सेयर आपुर्तिको अनुपातमा नियामक निकायहरुले माग बढाउन कुनै चासो नदिएकाले सेयर बजारका लगानी कर्ता निरास बन्दै गएको उनले बताए । ‘लगानी कर्ताको मनोबल टुटेको छ । नियामकहरुले केहि गरेनन् । बैंक र बीमा कम्पनीहरुको पुँजी ह्वात्तै बढाएर सेयरको आपुर्ति वृद्धि गरिदिए तर माग बढाउन कुनै उपाय ल्याएनन’, रौनियारले भने ।
आठ अर्ब पुँजीका बाणिज्य बैंक, २ अर्ब पुँजीका जीवन बीमा कम्पनी, एक अर्बका निर्जीबन कम्पनी, विकास बैंक, फाइनान्स, लघुवित्त, जलविद्युत कम्पनी र नयाँ बीमा कम्पनीहरुका कारण बजारमा सेयरको आपुर्ति माग भन्दा धेरै देखिन्छ । त्यसमा पनि पछिल्लो समय लगानीका लागि स्वर्णिम क्षेत्र मानिने जलविद्युत कम्पनीहरुको आइपीओ पनि ठुलै संख्यामा आउन लागेको देखिन्छ ।
‘आपुर्ति बढाईयो तर माग बढाउन ध्यान दिइएन, अनलाईन कारोबार नहुने, बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स नपाउने तर सेयरको आपुर्ति भने बढिरहने अनि कसरी बढ्छ सेयर बजार ? रौनियारले प्रतिप्रश्न गरे । उनले ५० जना ब्रोकरको कब्जाबाट सेयर बजारलाई मुक्त नबनाएसम्म सेयर बजार उभोँ नलाग्ने ठोकुवा समेत गरे । मार्जिन लेण्डिङमा गरिएको कडाईले पनि सेयर बजार घटाउन सहयोग गरेको उनले बताए ।
शिशिर ढुंगानाको बिदाईमा अर्थमन्त्रीले भनेः मेरो बायाँ हात कमजोर भयो
चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन हुने, १४ खर्ब लगानी प्रतिवद्धताको उपलब्धि खोई ?
कम्पनी दर्ता ऐन संशोधन गरेर ठूला प्राइभेट यातायात कम्पनी जन्माउने सरकारको तयारी
डेपुटी गभर्नर नेतृत्व समितिकाे म्याद सकियाे तर काम सकिएन, म्याद थप्ने तयारी
भारुमा प्रतिबन्धपछि भारतमा तरंग, नेपालले बदला लिएको भारतीय निष्कर्ष
वायुसेवा निगमको ऋणलाई सेयरमा रुपान्तरण गर्न तयार छौं : रमण नेपाल